I-AMP plug-in ngosizo lwe-IFrame - ZU
I-AMP plug-in yamakhasi anama-IFrames
Ijeneretha ye-Accelerated Mobile Pages (AMP) yokudala amakhasi e-Google AMP , ama- plugin e-AMP kanye nejeneretha yethegi ye-AMPHTML iqukethe ukuguqulwa okuzenzakalelayo kwama-iframe abe amathegi e-<amp-iframe>.
<amp-iframe> ukuhlanganiswa komaka
I-Accelerated Mobile Pages Generator ithola ngokuzenzakalelayo ukuthi i-iframe ifakiwe ekhasini lakho futhi iguqule noma imaphi ama-iframe ewatholayo abe umaka we-<amp-iframe>.
I-AMPHTML okwamanje ivumela kuphela ukulayishwa kokuqukethwe okunoxhumo oluvumelekile lwe-HTTPS !
I-Accelerated Mobile Pages Generator ihlola ukuthi i-URL esetshenziswe ku-iframe nayo ingafinyelelwa yini ngokuxhuma nge-HTTPS ngekhodi. Ukwenza lokhu, i-Accelerated Mobile Pages Generator imane ishintshanise i-'HTTP 'nge-'HTTPS' eku-URL. Uma i-URL ingavulwa nge-HTTPS, i-Accelerated Mobile Pages generator iguqula i-iframe ibe umaki we-'amp-iframe 'ohambelanayo futhi yenze nokuqukethwe kwe-iframe kutholakale kunguqulo ye-AMPHTML.
Uma i-URL ingenakulayishwa nge-HTTPS, okuqukethwe kwe-iframe akukwazi ukukhonjiswa ngqo kuhlobo lwe-AMPHTML. Kulokhu, i-Accelerated Mobile Pages Generator ibonisa isithombe sesimeli esilandelayo:
Ngokuchofoza lo mfanekiso, umsebenzisi angabe esevula okuqukethwe kwe-iframe ngoxhumano lwe-'HTTP 'olungabhalwanga. Ngale ndlela, okuqukethwe kwe-IFrame okungenani kungafinyelelwa ngesinye isixazululo futhi akunakwa ngokuphelele.